Deutsche Bank oo ka digaya qatar - BBC Somali
Deutsche Bank oo ka digaya qatar
13 Oktoobar 2011
Image caption Dexia Bank oo laga leeyahay Faransiiska iyo Belgium ayaa ka mid ah bangiyada dowladaha ay badbaadinayaan oo daymaha badan ku leh Gariiiga
Mid ka mid ah bangiyada ugu wayn Yurub Deutsche Bank ayaa dhaleeceeyay qorshaha lagu xalinayo dhabaatooyinka daymaha Yurub .
Josef Ackermann oo ah madaxa Bangiga Deutsche Bank, ayaa hadlay ka dib markii Midowga Yurub ay soo bandhigeen qorshe ay ka mid tahay in lagu qasbo bangiyada, inay lacag badan ay kaydsadaan si ay u xoogeeyaan lacagta ay haystaan hadii dalka Gariiga iyo waddamada kale ee Yurub ay bixin waayaan daymaha ay bangiyada ku leeyihiin.
Tan micnaheedu wuxuu yahay in bangiyadda hadii ay lacago aysan ka daysan karin suuqyada lacacagaha waa inay ka daynsadaan dowladaha.
Waxaa kaloo jiro qatar ah in bangiyadda ay daymo siin waayaan ganacsatada, sababtoo ah waxaa laga rabaa lacag badan oo kayd ah. Taasna waxay keenaysaa in dhaqaalaha yurub uu hoos u dhaco hadii ay bangiyada yareeyaan daymaha ay bixiyaan.